Qaabka wanaagsani ma yahay dammaanad dhabar caafimaad qabta?
Waa maxay qaabka wanaagsan oo ma saameeya caafimaadka dhabarkaaga?
Calaamadaha qaabka wanaagsan waxaa aqbalay A. Smythe, M. Jivanjee. Qaabka tooska ah iyo cidhiidhiga ah ee qaabka: Fikradaha caafimaad ee hadda jira / Australian Journal of Practice Guud wuxuu xisaabiyaa dhabar fidsan oo leh qalloocyo jireed oo yar oo ku yaal gobolka thoracic (kyphosis) iyo dhabarka hoose (lordosis), garbaha toosan, iyo booska qoorta toosan.
Isla mar ahaantaana, ilaa 1967, Professor John Keeve wuxuu u qoray JP Keeve. Jirdhiska, qaabka iyo khuraafaadka kale ee la doortay ee caafimaadka dugsiga / Joornaalka caafimaadka dugsiga ee saynisku aanu taageerin faa'iidooyinka muuqaalka quruxda ee muuqaalka caafimaadka dhabarka. In ka badan 50 sano ayaa ka soo wareegay, welina ma jirto caddayn la isku halleyn karo oo arrintan ku saabsan.
Cilmi-baarista 1. C. Tüzün, I. Yorulmaz, A. Cindaş. Dhabar-xanuun iyo joog hoose/Rumatoloji kiliinikada 2. D. Grob, H. Frauenfelder, AF Mannion. Xiriirka ka dhexeeya qalooca laf dhabarta ilmo-galeenka iyo qoorta xanuunka / joornaalka lafdhabarta Yurub 3. T. Widhe. Laf-dhabarta: booska, dhaqdhaqaaqa iyo xanuunka. Daraasad dheer laga bilaabo carruurnimada ilaa qaan-gaarnimada / Yurubta Spine Journal mugga4. KV Richards, DJ Beales, AJ Smith. Kooxaha Dheefta Qoorta iyo Ururkooda oo leh Sababaha Biyopsychosocial iyo Xanuunka Qoorta ee Dhallinta Australiyaanka ah / Daaweynta Jirka ee dadka waaweyn, carruurta, iyo dhalinyaradu ma helin wax xidhiidh ah oo ka dhexeeya qalooca laf dhabarta iyo caafimaadka. Isla gunaanadkii ayaa lagu gaadhay hubinta L. Tsai, T. Wredmark. Joogitaanka Laf-dhabarta, Dhaqdhaqaaqa Sagittal, iyo Qiimaynta Mawduuca ah ee Dhibaatooyinka Dhabarka ee Jimicsiga Sare ee Dumar hore / Lafdhabarta jimicsiyadii hore ee sare.
Laba dib u eegis 1. CTV Swain, F. Pan, PJ Owen. Ma jirto wax la isku raacsan yahay oo ku saabsan sababaha lafdhabarta ama soo-gaadhista jireed iyo xanuunka dhabarka hooseeya: Dib-u-eegis nidaamsan ee dib-u-eegis nidaamsan / Joornaalka biomechanics 2. L. Manchikanti, V. Singh, FJE Falco. Epidemiology ee xanuunka dhabarka hooseeya ee dadka qaangaarka ah / Neuromodulation ee waraaqaha sayniska sidoo kale ma arkin xiriirka ka dhexeeya booska iyo xanuunka dhabarka.
Waxaa laga yaabaa inaysan ahayn booska lafaha iyo kala-goysyada lafteeda, laakiin sida ay u socdaan. Saynis yahanadu waxay soo jeedinayaan in dhibaatooyinka dhabarka ay ka dhalan karaan sababo aan habooneyn H. Cramer, WE Mehling, FJ Saha. Wacyigelinta dambe iyo xiriirka ay la leedahay xanuunka: ansaxinta qalab cusub oo lagu cabbirayo wacyiga jirka ee bukaanka qaba xanuunka dabadheeraad / BMC Musculoskelet Disorders 2. C. Koch, F. Hänsel. Xanuunka Dhabarka Hoose ee Aan Gaarka ahayn iyo Xakamaynta Boostada Inta lagu jiro Joogitaanka Deggan – Dib-u-eegis Nidaamsan / Xuduudaha Cilmi-nafsiga ee firfircoonida muruqyada xudunta iyo miskaha. Tusaale ahaan, bukaanada qaba xanuunka dhabarka hooseeya, sinta sinta way adag tahay sababtoo ah dhaqdhaqaaqa xad-dhaafka ah ee glutes iyo murqaha oo toosiya lafdhabarta.
Maxaa muhiim u ah caafimaadka laf dhabarta
Dhakhaatiirta Vertebrologist iyo Dhaqan-celinta Anatoly Shishonin ayaa aaminsan in booska wanaagsan uu yahay, ugu horreyntii, maqnaanshaha murqaha muruqyada, oo aan ahayn dhammaan qaab-dhismeedka bilicsanaanta.
Shishonin Anatoly Yurievich Dhakhtarka daawada dib u soo celinta, qoraaga habka is-bogsiinta ee bukaanada qaba xanuunka joogtada ah. @ doctor.shishonin
Joogitaanka wanaagsan ayaa loo tixgelin karaa mid ilaalinaya booska caadiga ah ee jirka, kaas oo qaybo ka mid ah nidaamka muruqyada aan la buuxin.
Dhaqtarku waxa uu sheegay in kacsanaanta dheer ee murqaha ku wareegsan laf dhabarta ay khalkhal galin karaan wareegga dhiigga oo ay hor istaagaan dheecaanka xididada iyo dheecaanka lymfatic ee unugyada jilicsan ee dhabarka.
Tani, iyaduna, waxay gacan ka geysataa horumarinta isbeddellada qallafsan. Natiijo ahaan, xitaa culeysyada yaryar waxay keeni karaan soo-bax iyo hernia ee qaybta laf-dhabarka oo leh wareegga dhiigga oo yaraada.
Dhabar qumman oo toosan, oo inta badan lagu arki karo sawirro, maahan mid dammaanad qaadaya caafimaadka.
Sidaa darteed, muuqaalka muuqaalka ee arrimaha booska ayaa aad uga yar shaqeynta habka muruqyada. Laakiin sida loo fahmo inaad u baahan tahay inaad wax saxdo waa su'aal kale.
Sidee lagu ogaan karaa haddii boosku uu mudan yahay in la shaqeeyo
Anatoly Shishonin ayaa sheegay in isku-xidhka murqaha iyo xannibaadaha kala goysyada ay soo muuqan karaan da' kasta, laga bilaabo yaraanta. Waxay awoodaan inay is muujiyaan isla markiiba iyo ka dib muddo aad u dheer labadaba. Tusaale ahaan, ka dib markii aad daalan tahay walbahaarka jidhka ama maskaxda.
Haddii aad ka shakisan tahay dhibaatooyinka qaab-dhismeedka, ku bilow adiga oo eegaya caafimaadkaaga guud.
Daciifnimo, daal, culeys iyo niyad xumo ka dib markaad toosto, kuwani waa calaamadaha ugu horreeya ee meel jirka ka mid ah ay ka jiraan foci leh wareegga dhiigga oo yaraada. Haddii aad la kulanto wax sidan oo kale ah oo aan lahayn sabab nafsi ah oo cad ama jirro, waa inaad hubisaa isku-qabsiga murqaha iyo xannibaadaha xubnahaaga. Waqti ka dib, dhibaatooyinkani waxay u horseedi karaan hernia, protrusion, neuralgia, sciatica, iyo xitaa ischaemic stroke.
Cilmi-baadhis A. Searle, M. Spink, A. Ho. Waxqabadyada jimicsiga ee daaweynta xanuunka dhabarka hooseeya ee daba-dheeraada: dib-u-eegis nidaamsan iyo falanqaynta meta-falanqaynta tijaabooyinka la kala soocay ee la kala soocay / baxnaaninta bukaan-socodka waxay muujinaysaa in jimicsiyada horumarinta xoogga muruqa iyo isku-dubbaridka dhaqdhaqaaqa ay bixiyaan natiijooyin wanaagsan oo ku saabsan daaweynta xanuunka dhabarka ee joogtada ah.
Si kastaba ha noqotee, haddii ay dhibaato kaa haysato, waxaa fiican inaad doorato kulamo gaar ah dhakhtarka jimicsiga jimicsiga, oo aadan samayn wax jimicsi ah oo u muuqda inay ku caawinayaan.
Daaweeye baxnaanintu waxa uu kula taliyaa jimicsiyo joogto ah, oo si gaar ah loogu talagaly, duugista iyo is-duugista oo looga dan leeyahay in lagu nafiyo xiisadda muruqa. Habkani wuxuu kordhin doonaa fursadahaaga hagaajinta qaabeynta ee guuleysta wuxuuna yareynayaa khatarta ololka ee dhaqdhaqaaqyada aan habboonayn ee la doortay.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, Qaabka wanaagsani ma yahay dammaanad dhabar caafimaad qabta?!